dib u eegis kiniin Amazon Fire - Rule News
dib u eegis kiniin Amazon Fire
Waxaan lahaa filayo aad u yar oo ah £ 50 kiniin. Laakiin Fire Amazon oo dhan u burburay. Waa dhab arrin cajiib ah sida aan-qashinka waa marka ay kharash aad u yar.
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “dib u eegis kiniin Amazon Fire: badan oo kiniin loogu talagalay oo kaliya £ 50” waxaa qoray Samuel Gibbs, waayo theguardian.com on Thursday 12th November 2015 07.00 UTC
Amazon ee ugu dambeeyay Naarta qiimo jaban ku weydiiyo su'aasha ah: awooddo kiniin ah in aad dhigaya dib £ 50 oo keliya kasta, ama soo iibsadaan shan iyo aad u hesho mid lacag la'aan ah, wanaagsan wax u noqon oo dhan?
Waa version shanaad ee looxa Naarta asalka, kaas oo bilaabay in 2011 sida Amazon ee isku dayeysey in ay wiiqdo Apple ee iPad iyo soo saaro kiniin-jaban ah si ay u helaan buugaagta iyo adeegyada video.
A ma-sharraxaad Matt madow jirka caag ah. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Qaro, ugamuu oo adag waa sharaxaad ugu fiican oo kiniin Naar. Daboolay caag madow textured, waxa uu culeyskiisu yahay 313g, waa in ka badan 1cm qaro weyn oo uu dareensan yahay culays in gacanta.
Waxa uu dareensan yahay sida haddii ay qaadan kartaa a dhaawac ama laba aan arrinta. Amazon ayaa sheegtay kiniin Naarta jeer waa sida raagaya sida Apple iPad Air 2 ee "tijaabo ku dhicid" ee shirkadda. Waxaan si fiican u rumaysan karo in, laakiin ay size yar u badan tahay in door weyn ee in.
Gudoomiyaha dhabarka waa weyn ku filan si ay u daawadaan video markii Xararad, laakiin aan cod dheer ama cad oo ku filan si ay u daawadaan video ah halka mashiinka dharka lagu dhaqo ka socda haro xoolo ah buuxa jikada.
screen 7Oo ma aha HD. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
screen 7Oo ma aha HD. Waxay leedahay xal ah 1024 x 600 pixels, taas oo ka hooseeya xal 720p ugu yar ee HD ah. Waxa kale oo uu leeyahay cufnaanta a yar pixel ah 171 pixels per inch - waa iPad lahayn laakiin waxaa sidoo kale wax ka yar lixaad ah oo ka mid ah kharashka.
Laakiin shaashadda waa yaab wanaagsan qiimaha. Waxaa macquul ah oo dhalaalaya, uu leeyahay dhinacyo wanaagsan iyo daawashada waa midabo, xitaa haddii madow ay yihiin cirro yara. Laakiin ma laha shidma light daarmayaay'e ah, si aad u heli doonaa in ay gacanta ay qabsato iska indha habeenkii, oo ma ahan sida saxda ah tegayo.
Ma aha mid aad u xun, waayo, daawashada video ama ciyaaro, halka waa la mari karo buugta akhriska.
Xiriiriyaan: Wi-Fi, Bluetooth
Cabirka: 191 x 115 x 10.6mm
Ciyaaraha, apps iyo movies waa wanaagsan
kiniin Naarta waxay leedahay 5GB of user meel la heli karo ku-board, iyadoo booska card microSD waayo, isaga oo intaa raaciyay in ka badan a. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Kaniiniga Dabka ee processor 1.3GHz iyo 1GB ee RAM waxaa ma dhisayno shiday dunida, laakiin waxa ay ahaayeen lama filaan ah oo awood u leh in aan imtixaanka. kiniin wuxuu ahaa mid aan si gaar ah ee Volleyball-hawlgal, mana waxaa ku Hadhi ka buuxo.
Videos ku raran yihiin, iyo si dhakhso ah soo ciyaaray, kulan ahaayeen siman qaybta ugu, oo ay ku jiraan kulan degdeg ah oo ku saabsan garaaf ahaan oo kiniin ah ee walaalkiis ka weyn HD Naar 10 oo ceejisay. Games sida mashearulxaraam Valley dheer qaatay in shuban badan iPad ah, iyo bedelaan barnaamijyadooda orodka ahaa wax yar ka daalid waqti ka waqti, laakiin wax uu ahaa mid aad infuriating.
Batari ayaa socday muddo shan saacadood ah video loo maqli karo la screen u soo jeestay kor u iman doonaan dhalaalka ugu badnaan, dheer u yar darnaayeen la. Faaiidaysta ahaa mid gaabis ah, qaadashada in ka badan shan saacadood ay si buuxda u qaadaan. The Wi-Fi oo Bluetooth shaqeeyey sidii aad fili karto. A booska card microSD ayaa diyaar u ah isaga oo intaa raaciyay kaydinta dheeraad ah.
Dabka OS 5
La'aanta shidma iftiin daarmayaay'e ka dhigan tahay waxaa loo baahan yahay sixitaanka buugga of backlight ah, gaar ahaan iftiinka qoraxda dhalaalaya ama habeenkii. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
kiniin Naarbaa waddaa version ka mid ah Amazon ee Naarta OS Android 5.1.1 ku salaysan sida HD Naarta 10. Waxay ka dhigaysa qaadan to content oo kulan deg deg ah oo fudud.
Waxa kaliya ee uu heli karo dukaanka app Amazon ee, Si kastaba ha ahaatee, taas oo macnaheedu yahay in aad ku kooban ee doorashadaada codsiyada iyo ciyaaraha marka la barbar dhigo Store Play Google. Inta badan, laakiin dhammaantiin ma aha mid ah barnaamijyadooda sare waxaa laga heli karaa, intii hoorto adeegyada video sida Netflix.
Dabka ayaa sidoo kale waxa uu leeyahay adeeg dhulka hoostiisa mara Amazon ee, oo bixisa barnaamijyadooda for free la free iibsadaan in-app, haddii aad isku qori Ra'iisul adeegga shirkadda.
Sida aad ka fili karto, Amazon ee is-dhexgalka ee ay video gaar ah, music, buugaagta iyo adeegyada shopping waa heer sare.
Kamaradaha ayaa masaakiinta ah, kaliya aad u fiican oo ku filan u Snapchat. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
The camera 2-megapixel dhabarka u cabsi badan. Waxaa soo saarta sawirada ku saabsan tayada isku mid ah iyo faahfaahin camera CCTV ah, oo aan mid wanaagsan. camera sawir VGA The yar ka fiican yahay, laakiin in aan ku yidhaahdeen badan.
Amazon Naarbaa kharash kaliya £ 50 oo waxaa laga heli karaa in ka yar doqonimo "gadan shan ka heli mid ka mid lacag la'aan ah" (BFGOF) dalab. kaniini ayaa ku soo beegmay iyada oo xayaysiisyada shaashadda qufulka, Si kastaba ha ahaatee, oo iyaga ka saareen kharash £ 10.
The kiniin dhow ku tilmaamay ka Samsung ama Asus kor qiimaha £ 70.
Ma ahan kiniin cajiib ah oo ay kala mid ka mid ah malaha. Screen waa xal u hooseeya, batteriga ma socon in dheer, kaamirooyinka ay yihiin xun, waa culus oo ugamuu oo kaliya ayaa 5GB ee lagu kaydiyo gudaha la geli karo si user ah.
Waa maya iPad ama xataa Nexus 7, laakiin waa kiniin ah 7Oo raqiis ah oo faraxsan in uu dareensan yahay sida in uu socon doono iyo run ahaantii ma ahan haddii uusan sababtoo ah aad mid kale soo iibsan kareyso oo kaliya.
Waxaa dhab ahaantii kaliya macno haddii aad isku qori adeeg Ra'iisul Amazon ee video, buugaagta iyo barnaamijyadooda, laakiin at £ 50 waa iibsan ah maayad.
Iidooyinka: cheap, Amazon video, buugaagta iyo adeegyada music, booska kaarka microSD, dareensan raagaya
Arrrimaha: screen low-ku dhigsan, culus, ugamuu, kamaradaha saboolka ah, qaadataa da'doodu u xukumaya, nolosha batteriga ma fantastic
Kaniiniga qaadataa in ka badan shan saacadood in ay ka qaadaan via microUSB. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Amazon Naarta HD 10 dib u eegis: jarida geesood qaldan daliil qalad qaali
Amazon.com, Android, Qodobka, Qalab, Dib u eegida, Samuel Gibbs, kombiyuutarada Tablet, Technology
← Blackphone 2 dib u eegis: gaarka ah uusan haysan inay ku timaado kharashka geynta imtixaanka Facebook-style Snapchat chat is-destructing in Rasuulka →